မြန်မာ့သားကောင်း: What is sexy???? မြန်မာ အမျိုးသမီးလေးတွေ ဖတ်စေချင်ပါတယ်.....
တယ်" ဆိုပါလား။ မောင်လေးကတော့ မျက်လုံးပြူး၊ မျက်ဆံပြူး တွေဖြစ်လို့...အဲဒါနဲ့ အစ်မကြီး ပီသစွာနဲ့ ကျွန်မသမီးတုန်းက ဒီလို ကိစ္စကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းခဲ့ ကြသလဲ ဆိုတာကို ပြန်မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်လောက် တုန်းက သမီးအသက် ၁၄နှစ်၊ အထက်တန်းကျောင်း စတက်တဲ့ အချိန်မှာ... ဒီဆက်စီ ဆိုတဲ့စကားကို စသိလာပါတယ်။ တူမလေးလိုပဲ ဆက်စီ ဖြစ်ချင်ပါသတဲ့ သမီးချောက။ ဒါနဲ့ သမီးကို ဆက်စီ ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ရှင်းပြပါ လားလို့ မေးတော့... ထင်တဲ့ အတိုင်းပါပဲ... ရေရေရာရာ မပြောနိုင်ပါဘူး။ ဒီတော့ သူ့ကို နားလည်အောင် ရှင်းပြဖို့ အချက်ရ သွားတာပေါ့။ "ဆက်စီ ဆိုတာ ကျန်းမာ သန့်ရှင်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်၊ ကြည်လင်နေတဲ့ အသားအရည်၊ လန်းဆန်း တက်ကြွမှု ရှိတာ...အင်း...သန့်ရှင်း သပ်ရပ်တဲ့ အခန်းလေး တစ်ခုလိုပေါ့။" သမီးကြည့်ရတာ ကျွန်မရဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက် မှာသူကြားချင်တဲ့ စကားလုံးတွေ မပါတော့ သိပ်ကျေနပ် ပုံမရပါဘူး။ သူ့သူငယ်ချင်းမ တွေဆီ ဖုန်းဆက်ပြီး သူ့အမေ အကြောင်း အတင်းတုပ် ပါလေရော။
blog တစ်ခုမှာ တွေ့လိုက်ရတဲ့ chubbymommyme ဆိုတဲ့သူလေးရဲ့ ဆက်စီ အပေါ် အမြင်လေးကို သဘောကျ လို့မျှပေးလိုက် ပါတယ်။ "ဆက်စီဆိုတာ အားလုံးရဲ့ အထက်မှာ ရှိတယ်လို့ ခံစားမိတာပါ။ ကြည့်ကောင်းပြီး ကိုယ့်စိတ်က fantastic ဖြစ်မယ် ဆိုရင် ယုံကြည်မှု ရှိလာမှာပါ။ ဆက်စီက ၀ယ်လို့ ရတဲ့အရာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ် ဆက်စီ ဖြစ်မှ တကယ် ထွက်လာမှာပါ။" "Sexy means feeling like on top of the world. Looking good and feeling just fantastic inside. That's where confidence comes from. You can't buy sexiness. It comes out if you really are sexy." ကဲ.. အားလုံးပဲ ဆက်စီကျကျ လှပနိုင်ကြပါစေ။
Myanmar Youth Media Club မှကူးယူဖေါ်ပြသည်။
At 11/08/2012 12:34:00 PM